Ciidanka Kumaandooska oo hawlgal ka wada Gobolka Shabellaha Hoose | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Ciidanka Kumaandooska oo hawlgal ka wada Gobolka Shabellaha Hoose
Ciidanka Kumaandooska oo hawlgal ka wada Gobolka Shabellaha Hoose
Ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Kumaandooska Danab ayaa waxaa la soo sheegaya in ay maanta hawlgalo ballaaran ka wadaan deegaano ka tirsan Gobolka Shabellaha Hoose.
Ciidanka Kumaandooska ayaa waxay hawlgaladan ka kala wadaan Deegaanada Baladul Amiin, Macalinka, Buulo Bashiir iyo qaybo ka mid ah Deegaanka Toora Tooroow, oo ku beegan Degmada Awdheegle.
Sidoo kale Ciidanka Danba ayaa hawlgal amni xaqiijin ah ka sameeyay Deegaanada Bariire, Sabiid iyo Caanoole, ayna gacanta ku soo dhigeen lix nin oo lala xiriirinayo maleeshiyada Ururka Al Shabaab.
Taliyaha Guutada 16aad ee Ciidanka Kumaandooska Danab, Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Maalin ayaa xaqiijiyay hawlgalka inay ku soo qabteen lix nin oo Al Shabaab ah iyo hubkii ay wateenba.
Taliyaha oo la hadlay Radiyaha Ciidamada Qalabka Sida ayaa hawlgalo socda ku tilmaamay kuwo lagu burburinayo goobaha, ay ku dhuumaaleystaan maleeshiyada Ururka Al Shabaab, sida uu yiri.
Waxa kaloo uu sheegay in inta uu hawlgalka socday lagu burburiyay goobo dhawr ah, oo ay ku dhuumaleysanayeen maleeshiyada Al Shabaab, ka hor inta aanu hawlgalka bilaabina ay inta badan goobahaasi isaga baxeen maleeshiyadii Shabaabka.
Waxaa uu intaa ku daray in sidoo kale ay mintidiinta Al Shabaab isaga baxeen Degmada Sablaale iyo Deegaanka Janaale, ka dib baqdin ka soo wajahday buu yiri Ciidanka Kumaandooska ee Xoogga Dalka ka tirsan.
Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Maalin, Taliyaha Guutada 16aad ee Ciidanka Kumaandooska Danab ayaa ku goodiyay inay dardar-gelinayan hawlgalada lagu burburinayo goobaha, ay gabaadka ka dhigtaan dagaal-yahanada mayalka adag ee Al Shabaab.
Hawlgalada maanta ka soconaya Gobolka Shabellaha Hoose ayaa ku soo aadaya, maalmo ka dib weeraradii uu dhiigga badani ku daatay, ee ay Shabaabka maalintii Arbacada ka kala gaysteen Xerada Ciidamada Dowladda ku leeyihiin Ceel Saliini iyo Degmada Qoryooley ee Gobolka Shabellaha Hoose.